Ny sidina Pegasus tiorka dia nandefa sidina nankany Medina sy Batumi
Home » Lahatsoratra farany farany » Fandefasana gazety » Ny sidina Pegasus tiorka dia nandefa sidina nankany Medina sy Batumi
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Georgia • Vaovao • Fandefasana gazety • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Turkey Breaking News • Vaovao isan-karazany
Manohy manitatra ny tamba-jotra ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Pegasus amin'ny alàlan'ny fanombohana zotra roa vaovao. Ny fandefasana an'i Medina dia hahatonga azy io ho toerana fahaefatra Pegasus any Arabia Saodita, ankoatran'i Dammam, Jeddah ary Riyadh, miaraka amin'ny sidina nanomboka ny 12 Janoary 2020. Pegasus koa dia mandefa sidina mankany Batumi, ny toerana faharoa any Georgia aorian'ny Tbilisi, toy ny tamin'ny 29 martsa 2020.
Ny sidina mankany Medina dia misy amin'ny London Stansted sy Manchester Airport. Pegasus'Ny sidina mankany Medina dia hiainga avy any London Stansted amin'ny alàlan'ny Istanbul Sabiha Gökçen mankany amin'ny seranam-piaramanidina Prince Mohammad Bin Abdulaziz ny Alatsinainy, Alakamisy ary Alahady, ary hiala amin'ny Seranam-piaramanidin'i Manchester amin'ny Alatsinainy sy Alahady. Ny sidina miverina dia hiala amin'ny seranam-piaramanidina Prince Mohammad Bin Abdulaziz mankany London Stansted sy Manchester amin'ny alàlan'ny Istanbul Sabiha Gökçen ny alatsinainy, talata ary zoma.
Ny sidina mankany Batumi dia misy avy London Stansted via Istanbul Sabiha Gökçen. Ny sidina Pegasus eo anelanelan'ny Istanbul sy Batumi dia hiala amin'ny London Stansted amin'ny alàlan'ny Istanbul Sabiha Gökçen mankany amin'ny seranam-piaramanidina Batumi amin'ny Alatsinainy, Alarobia, Zoma ary Alahady.